Shirkad ay maamulaan militariga Itoobiya oo lagu eedeeyay inay hubka sharci darrada u gudbin jirtay Soomaaliya
Madaxii hore ee shirkadda Metec,Kinfe Dagnew ayaa shalay la xiray
Shirkad ay militariga Itoobiya maamulaan oo lagu magacaabo Metec ayaa lagu eedeeyay inay ku lug lahayd ganacsiga sharci darrada ee hubka, sida lagu sheegay barnaamij uu tebiyay telefishinka dowladda ee ETV.
Waxaa xabsiga la dhigay madaxii hore ee shirkadda Metec Janaraal Gen Kinfe Dagnew oo isku dayay inuu u xabsado dalka Suudaan.
Barnaamijka ayaa ku eedeeyay saraakiisha maamuleysay shirkadda inay hubka u safrin jireen dalka Soomaaliya.
Suleymaan Dedefo oo ah safiirkii hore ee Itoobiya u fadhin jiray Jabuuti ayaa barnaamij ka baxay ETV u sheegay in sannadkii 2016-kii shirkadda Metec lagu tuhmay inay soo iibsatay labo maraakiib ah oo markii dambe ay u isticmaalayeen saraakiisha shirkadda inay hubka iyo aalabaha kale ee sharci darrada ah u dhoofiyaan dalalka Iiraan iyo Soomaaliya.
Wuxuu sheegay safiirka inuu warqad u qoray wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya si ay ula socdaan eedeymaha loo soo jeediyay shirkadda balse dowladda Itoobiya kama aysan hadlin arrintaasi.
Isniintii, xeer ilaaliyaha guud ee dalka Itoobiya Berhanu Tsegaye wuxuu shaaca ka qaaday in musuq maasuq baahsan lagu helay shirkadda kaddib markii shan bilood ah oo baaritaanno ah.
Waxaa la xiray 27 saraakiil oo shirkadda maamuleysay.
Itoobiya waxaa ka socdaa howlgallo ka dhan musuq maasuqa, waxayna ka qayb yihiin isbadallada taariikhiiga ah uu garwadeenka ka yahay ra’iisul wasaare Abiy Axmed.
Bishii Agosto ayay ahayd markii uu Ra’iisul wasaaraha heshiiskii qanddaraaska dhisitaanka biyo xireenka kala noqday shirkadda Metec isla markaasna siiyay shirkaddo shisheeye.
Itoobiya oo Puntland ku sheegtey dalalka ciidamadooda Badda dhisey [Sabab]
Afrika 09.11.2018. 13:13
Taliye ku xigeenka ciidamada difaaca Itoobiya oo la hadlay wakaalada wararka...
Khariidad ay Itoobiya daabacday oo Soomaaliya aysan ku jirin
Soomaliya 26.05.2019. 23:19
ISBAHAYSIGA SEDAX GEESOODKA AH
Fikradaha 14.11.2018. 20:14
Itoobiya oo beenisay wararka laga baahiyey Abiy Axmed iyo Uhuru
Afrika 24.03.2020. 06:51
Hogaamiyeyaasha Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya oo kulmaya
Afrika 26.01.2020. 19:00